Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Aviation » Boeing 777X waxay timid Dubai 2021 Dubia Airshow
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Shirka Warka Warshadaha • Shirarka • News • Dadka • Waajib ah • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Wararka Imaaraadka Carabta • Wararka Mareykanka
Boeing 777X waxay timid Dubai 2021 Dubia Airshow.
Diyaaradda Boeing 777-9 ee tijaabada duulimaadka duulimaadka ayaa markii ugu horeysay ku bilaabatay duulimaad caalami ah, iyadoo si aan joogsi lahayn uga duushay Seattle kuna sii jeeday Imaaraadka Carabta.
Boeing 777X waxaa lagu soo bandhigi doonaa Dubia Airshow laga bilaabo Noofambar 14, 2021.
Iyada oo la dhisayo sida ugu wanaagsan ee 777 iyo 787 qoysaska Dreamliner ee hormuudka ka ah warshadaha, 777-9 waxay noqon doonaan jetka mataanaha ee ugu weyn uguna waxtarka badan adduunka.
Qoyska 777X waxay leeyihiin wadar ahaan 351 amaro iyo ballanqaadyo ka yimid sideed macaamiil hormuudka ka ah adduunka oo dhan.
Waxaa timid Boeing 777X cusub Dubai World Central saacadu markay tahay 14:02 pm (GST) maanta, ka hor bandhiga Dubia Airshow ee soo socda. Diyaaradda ayaa soo muuqan doonta muuqaal aan caadi ahayn waxaana lagu soo bandhigi doonaa barnaamijka duulista ee ka bilaabmaya Noofambar 14.
Tijaabada duulimaadka 777-9 ayaa duulimaad aan joogsi lahayn ku dhawaad ​​15 saacadood ka samaysay Seattle Boeing Garoonka ilaa Dubai, Duullimaadkii ugu horreeyay ee caalami ah iyo duulimaadkii ugu dheeraa ilaa taariikhda 777X iyada oo ay sii socoto in ay marayso barnaamijka imtixaan adag.
Iyada oo laga duulayo sida ugu wanaagsan ee shirkadaha hogaaminaya 777 iyo 787 qoysaska Dreamliner, 777-9 waxay noqon doontaa diyaarada mataanaha ah ee ugu weyn uguna waxtarka badan adduunka, iyadoo bixinaysa 10% isticmaalka shidaalka, qiiqa iyo kharashaadka hawlgalka marka loo eego tartanka iyo rakaab gaar ah. waayo-aragnimo. Qoyska 777X waxay leeyihiin wadar ahaan 351 amaro iyo ballanqaadyo ka yimid sideed macaamiil hormuudka ka ah adduunka oo dhan. keenista ugu horraysa ee diyaarada ayaa la filayaa dhamaadka 2023.
Boeing waxay horumarisaa, soo saartaa oo ay u adeegtaa diyaarado ganacsi, alaab difaac iyo nidaam meel bannaan oo loogu talagalay macaamiisha in ka badan 150 waddan. Sida dhoofiye sare oo Maraykan ah, shirkadu waxay ka faa'iidaysataa kartida saldhigga alaab-qeybiyaha caalamiga ah si ay u horumariso fursadaha dhaqaale, waaritaanka iyo saameynta bulshada. Kooxda Boeing ee kala duwan waxaa ka go'an in ay u ikhtiraacdo mustaqbalka oo ay ku noolaadaan qiyamka asaasiga ah ee shirkadda ee badbaadada, tayada iyo daacadnimada.
Nofeembar 14, 2021 at 05: 18
Waad ku mahadsan tahay boostada weyn. Runtii aad baan ugu riyaaqay akhrinteeda qoraalkan oo ku filan inaan raadiyo qorista maqaalkan wanaagsan iyo qoraalkan waxtarka leh mahadsanid wadaagga. Eeg liiskan maqaallo iyo qormooyin xiiso leh oo ku saabsan mowduucyo ay ka mid yihiin caafimaadka, farxadda, wax soo saarka iyo wax ka badan.